Wasiirka Qurba Joogta DDSI oo si Meeqaam Sare ah loogu soo dhaweeyay caasimada Dooxa ee Dalka Qadar. - Cakaara News
Wasiirka Qurba Joogta DDSI oo si Meeqaam Sare ah loogu soo dhaweeyay caasimada Dooxa ee Dalka Qadar.
Dooxa(CN) 18,March 18, 2015 Xukuumada DDSI ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii loo sii xoojin lahaa loogana midho dhalin lahaa istaraatijiyadaha, barnaaamijyada siyaasadeed ee ku qotoma hirgalinta xidhiidhka sarax tiran ee ka dhexeeya qurba joogta u dhalatay deegaanka iyo xukuumada DDSI.
Qurba joogta u dhalatay deegaanka ee ku dhaqan dhamaan daafaha aduunka iyo xukuumada DDSI ayaa sanadihii hore waxaa u dhexeeyay gab cucul oo ay xukuumadihii hore ku guul daranaysteen in ay qurba joogta deegaanka u kala saaraan itoobiyadii hore iyo tan maanta waxa u dhexeeya.
Haddaba markii ay xukuumada DDSI sanadihii ugu danbeeyay dajisatay qorshayaal lagu hirgalinayo xidhiidka mug leh oo dhex mara qurba joogta iyo xukuumada ayaa si durugsan looga midho dhaliyay ka dib markii ay xukuumada DDSI socdaalo dhaxal gal ah ku martay dhamaan qaaradaha aduunka sodaaladaasi oo noqday gashi horumarineed.
Sidaad wararkayaga kula socodtaan waxaa socdaalo muhiim ah ku jooga qaarka mid ah qaaradaha aduunka waftiyo balaadhan oo uu ka mid yahay mid ka uu hogaaminayo madaxwayne DDSI mudane cabdi maxamuud cumar ee ku sugan wadanka maraykanka.
Dhankiisa waxaa isaguna socdaalkaasi oo kale u baxay wasiirka qurba joogta DDSI mudane cabdibari maxamed macalin socdaalkasi ku soo mari doona qaarka mid ah wamada carabta.
Wuxuuna socdaalkiisii ugu horeeyay ku gaadhay xarunta wadanka qadar ee dooxa halkaasi oo ay jahliyada wadanka qadar iyo masuuliyiin ka socday safaarada dalka itoobiya ee qadar ay siwayn ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradah ee Caasimadda Dooxa Hamad International Airport wasiirka ayaa oo la hadlay jahliyadan soo dhawaysay ayaa ka warbixiyay ahmiyada socdaalkiisa sheegayna in uu shirar muhiim ah la yeelan doono jahliyada wakhiyadan inagu soo socda.